“एकै क्लिकमा देशभरको माटो,को जानकारी,,, – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“एकै क्लिकमा देशभरको माटो,को जानकारी,,,
“काठमाडौँ, २ माघ । अब देशका जुनसुुकै कुनाको माटोबारे जानकारी लिन कम्प्युटरमा एक पटक क्लिक गरे पुुग्ने भएको छ । त्यसका लागि कृषि तथा पशुुपन्छी विकास मन्त्रालयले देशैभरको माटोलाई विद्युतीय नक्साङ्कन (डिजिटल म्यापिङ) गर्ने भएको छ ।
“देशैभरको जुनसुकै कुनाको माटोबारे जानकारी लिन विद्युतीय नक्साङ्कन तयार भइरहेको र कसैलाई कुनै ठाउँको माटोको गुणस्तरबारे जानाकारी लिनुुछ भने एक क्लिक गरे पुुग्ने कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुुभयो ।
“यो विद्युतीय नक्सा तयार भएपछि प्रदेश, जिल्ला, पालिका, वडाको मात्रै होइन कुनै बिन्दुुमा एक क्लिक गरेपछि त्यहाँको माटोको गुणस्तरबारे जानकारी पाउन सकिने गरी नक्साङ्कन भइरहेको उहाँले बताउनुुभयो । हालसम्म ५७ वटा जिल्लाबाट २३ हजार नमुना सङ्कलन गरेर त्यसको विश्लेषण भइसकेको र अरू जिल्लाको पनि सङ्कलन गर्ने कार्य जारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“माटो परीक्षण स्याटेलाइटमार्फत भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मल विकास केन्द्रका माटो वैज्ञानिक डा. यम गैरेले बताउनुुभयो । विभिन्न ठाउँबाट २३ हजार नमुना सङ्कलन भएको र त्यसको आधारमा अन्य ठाउँको माटोलाई स्याटेलाइटमार्फत माटो परीक्षण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“यो माटोसम्बन्धी विद्युतीय नक्साङ्कन लागि सार्क मुलुकमै नेपाल नै पहिलो देश हुने उहाँले बताउनुभयो । सार्कको सबभन्दा ठूलो देश भारतमा समेत यस्तो नक्सा छैन । यो नक्सा कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल नै पहिलो हुनेछ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
Previous “अझै पर्ख र हेरको,मुडमा देउवा””
Next “जनकपुर देखी”जयनगर” सम्म रेल सञ्चालन हुँदै”
10 hours ago Mechi Mahakali
29 mins ago मेचीमहाकाली संवाददाता
“उमेश श्रेष्ठ बने स्वास्थ्य, राज्यमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री को बन्ला ?
“ज्ञानेन्द्र शाही एमसिसी, विरुद्ध सडक मा उत्रिए “
“एमालेमा माधव नेपालको, स्थान लिने भीम रावल’को रणनीति”